DivineRevelations Tranonkala mirakitra ireo fifanatrahana mivantana tamin’I Jesosy Kristy
DIVINE REVELATIONS: Tranonkala mirakitra ireo fifanatrahana mivantana tamin'I Jesosy Kristy
Tena misy marina ny paradisa Mino izany ve ianao? Miavaka tokoa ny fitantaran'I Choo Thomas ny fihaonany tamin'I Jesosy izay nahitany ny Lanitra, ny helo, ny andro fampakarana sy ny fampahorian-dehibe. Tokony handre ity tantara ity ny kristiana rehetra.
Tena misy, Tena Misy ny helo, efa hitako
I Jennifer Perez, tovovavy iray 15 taona nobeazina tao anaty ankohonana kristiana nefa niverin-dàlana, maty noho ny habetsahan'ny rongony nofohiny izy ka nariana tany amin'ny helo, soa ihany anefa fa nomena famindram-po farany hampitandrina ireo very sy niverin-dàlana ary ireo matimaty ny amin'ny hafatra maika.
Fanambarana avy any ambony momba ny
Horonantsary tokony ho hitan'ny rehetra, Mitantara ny niaretana sy ny nahafatesan'ny mpamonjy be fitia ho an'ny olombelona. Aoka ianao tsy hinia tsy hahita ny halafo vidin'ny otantsika, sy ny fitiavan-dehiben'I Kristy.
23 minitra tany amin'ny helo.
Fijoroam-bavolombelona mampiaiky volana nataon'I Bill Wiese ny amin'ny niainany ny helo nandritry ny 23 minitra. Hazavainy amin'ny antsipirihany ny zavatra
Natao batisa tamin'ny afo miredareda
Pasitera Yong-Doo Kim PDF #2
Ireto boky ireto dia mitantara ny fomba maty paika indrindra enti-miady ara-panahy izay tsy mbola hitako hatrizay.Hanaitra olona maro manerana izao tontolo izao izy ity ary hampilavo lefona vondron-devoly maro. Aharihary avokoa ireo devoly, omen’Andrimanitra fitaovam-piadiana vaovao maro samihafa ny tafika ampiasainy mandritra izao andro farany izao. Mitarika olona maro ho any amin’ny helo ny fanahy ratsy ary miezaka mafy hampikatso ny asa rehetra ataon’ny fiangonana; fitoriana, tafika masina, fiombonam-bavaka, fanompoana, fanaovan-tsoa sns… araka ny fanoharan’I Jesosy dia amin’ny alina, rehefa matory ny olona, no amafazan’ny fahavalo ny voaratsiny. Tsapa araka izany fa manan-danja indrindra ny fiaraha-mivavaka mandritry ny alina (NUWI) raha te-hanohitra ny devoly. Mampihena tanteraka ny herin’ny fahavalo ny fanomezam-pahasoavan’ny maso ara-panahy, satria tsy ahafahany miafina, mampibaribary ny momba azy, ny hafetseny, ny famitahany, ny fahadisoam-panantenany, ny fanovàny endrika ary ny toerany. Ity fanambarana ity dia hanova ny fiangonana ho mpanafika amin’izay fa tsy hiaro tena lava izao. doc
Fanambarana ny amin'ny lanitra nataona tanora kolombiana 7.
Ireto tanora kolombiana fito ireto dia naira-nentin’i Jesosy Kristy hatoro ny lanitra sy ny helo. Henoy ny fitantaran’izy ireo ny voninahitry ny lanitra tsara tsy hay vinaniana nomanina ho an’ny kristiana mpankato.
Fanambarana ny amin'ny helo nataona tanora kolombiana 7
Niseho teo afovoany I Jesosy Kristy raha izy ireo naira-nivavaka iny. Natoro azy ireo tamin’izany ny manjo ireo tsy mpankato sy ratsy fanahy. Ity fijoroana ity dia hanampy anao handroso tahotra an’Andriamanitra sy hiala amin’ny fahotana maharingana.
Ny fomba anakanan'I satana ny vavaka asandrantsika.
Ady any amin'ny tontolo ara-panahy (John Mulinde)
Rehefa maty I Rev. Yong Park dia natoro ny fomba famalian-tsoa ny tsirairay avy any an-danitra sy ny fahadisoana mahavery ny kristiana any amin'ny helo
Mpianatry ny mpimasy
- I Theo Nez
Rehefa avy namaky ny bokin’i Mary Baxter I Theo dia nihevitra fa mbola misy 30 taona hiainany hahafahany manitsy ny diany ho an’Andriamanitra nefa inona fa maty enim-bolana monja taorian’io noho ny fidorohana be loatra. Nentin’I Jesosy tany amin’ny helo izy ka natorony ny lavaka efa nohadian’I satana ho azy.
Ny misiterin’ny paradisa
Ny Eveka Bishop Earthquake Kelley
Traikefam-pahafatesana miavaka manambara ny lanitra sy ny helo. Mpanao ody izy taloha ka nanambara ny tsiambaratelon'izany. Izy koa ankoatr'izay dia nomena hafatra fampitandremana ny fiangonana sy Amerika.
Ilay evanjelisitra tany George Street.
Tantaran'I Frank Jenner mahasondriana loatra. Ny fomba mahagaga nampiasan' Andriamanitra azy hanelezana ny vaovao mahafaly momba an'I Jesosy manerana izao tontolo izao. Fomba tsotra nefa nanova fon'olona tsy tambo isaina.
Ny sabatra sy ny menarana
Fahitana mafonja enti-mampitandrina ireo mpitory sy mpitandrina ny amin'izay hitranga amin'ireo tsy tena mitory ny fampianaran'Andriamanitra feno. Andriamanitra no tokony hatahoran'izay manompo azy fa tsy olona.
Hafatra 6 ho an'ny fiangonana
Pasitora Brani Duyon
8 ora tany an-danitra
Efa nambaran’ny Tompo fa olona maro, mpitandrina, eny fa misy fiangonana iray manontolo mihitsy aza no tsy hampakarina. Mampitandrina mafy ny Tompo ny amin’ireo mpitory tsy mampianatra ny fahamasinana. Izay tsy manam-pahamasinana tsy mba hahita ny Tompo. doc
Aoka ho vonona amin’ny fiavian’ny Tompo
I soeur Bernada Fernandez dia niaraka tamin’i Jesosy tany an-danitra sy tany amin’ny helo. Natoro azy ireo valisoan-danitra ho an’ireo masina, ny fampakarana, ny hanimpy sy ny hazon’aina. Hitany tamin’izany koa ny haratsy toeran’ny fiangonana, ny fitsarana farany ary ireo fanahy very any amin’ny helo. doc
Tsy misy fotoana intsony.
Fijoroam-bavolombelon'I Victoria Nehale ny amin'ny famangian' I Jesosy kristy azy im-betsaka; mbola fampitandremana hatrany ny tsy maintsy hiverenany faingana.
Raha te-hahafantatra ny Tompo ianao tsy maintsy mahalala ireo namany. Tsy ho fantatrao mihitsy anefa izy ireo raha tsy rotidrotika sy torotoro ny fonao.